Ichi chigadzirwa ndiyo ichangoburwa nyanzvi lotion, pefiyumu, nezvimwewo nekambani yedu kujekesa uye kusefa iyo mvura mushure mekutonhora; ndiyo michina yakakodzera yefekitori yekuzora yekuzora mafuta uye mafuta. Izvo zvinhu zveichi chigadzirwa chakagadzirwa nemhando yepamusoro 304 simbi isina waya kana 316L simbi isina waya, uye pneumatic diaphragm pombi inotengeswa kubva kuUnited States inoshandiswa senzvimbo yekumanikidza kweiyo yakanaka yekumanikidza kusefa. Iyo inobatanidza pombi inotora yakachena yakabwinyiswa ...
Tube yemukati yekupisa yekuzadza uye yekuisa chisimbiso muchina inoshandisa compose hose uye epurasitiki hosi semudziyo, ine inopisa mweya kudziya uye kuvhara. Maitiro ese anotariswa nePLC uye anoratidzwa nekubata skrini.
Tube nzira yekumisikidza, photoelectric servo mota control;
16station otomatiki muhombe, achizadza kutsanya, chaiyo kuyerwa;
Dhijitari yakakwira-mhanyisa yekuzadza vhoriyamu mutongi, zviri nyore kugadzirisa kuyerwa;
Inopinza mweya unopisa mukati mekudziya mudziyo, yakavharwa muswe aesthetic uye yakasimba;
Inesarudzo maererano nezvakasiyana zvinhu: hooper kudziyisa system, anti-dhizaini yekuzadza misoro.
Zvekushandisa Rondedzero uye Quotation Nha. Zita Hwakawanda Basa ReMutengo Mutengo Wakazara Mashoko 1 Chinyorwa bhodhoro turntable 1 Nemaoko isa bhodhoro mune isina chinhu bhodhoro rinobata $ 4,055.00 $ 4,055.00 Bhodhoro rinobata mukati chaimo uye ndokusiya 2 GF16 / 5 Rotary Piston Kuzadza uye Capping Machine 1 16-musoro pisitoni yekuzadza muchina; 5-musoro capping oparesheni. $ 54,765.00 $ 54,765.00 Cylinder yakaturika mhando, cam drive, yepasi rese humburumbira vharuvhu yakabatanidzwa struct ...
Ichi chigadzirwa iiri-yechina-chinangwa yekuzadza muchina wekunamatira uye mvura, yakagadzirirwa kushandiswa mune anti-mhirizhonga units.Muchina unoshanda kune huwandu hwekuzadza kwemvura, mafuta, emulsion uye yekunamatira-senge zvinhu. Tafura yebasa inogona kusimudzwa zvinoenderana nechido chekuzadza. Feeding nzira: yakajairika giravhiti / otomatiki yekukweva-mhando Kudzora: yemagetsi kudzora / pneumatic kudzora Kuzadza vhoriyamu: 5-1000ml, iyo yakakamurwa kuita matanhatu akateedzana A, B, C, D, E, F. 1. Maumbirwo maficha: Ichi chigadzirwa chinoshandisa plug-in ...
1. Zvizere otomatiki unscrambler Nhanganyaya: Zvizere otomatiki unscrambler anogona kuita akaunganidzwa bhodhoro muhurongwa, uye anogona kuendesa bhodhoro kune anotakura mumwe neumwe, uyezve iyo bhodhoro inodzosera mudziyo inoshandura iyo bhodhoro kuita nzira imwe uye voenda navo munzvimbo yekuzadza. Main technical technical parameter: Zivisa chinzvimbo: 60-120 mabhodhoro / min Kushanda: kutenderera epurasitiki bhodhoro 10ml-100ml Simba: 340w Yakadzvanywa mweya: 3-5kg / m³ Dimension (mm): 960 * 960 * 1140 Kurema: 450kg 2. Cylinder mhando ultrasonic washi ...
Perfume yekuzadza uye yekukanda tambo Model 4 magezi Bhodhoro Kureba ≤250mm Maximum dhayamita yemuromo bhodhoro ≤Φ35mm Minimum dhayamita ≤Φ4.5mm Adjustable mvura nhanho (kure nemuromo webhodhoro) 15-50mm Matanho (kusasanganisa mabhodhoro emvura) （L * W * H） 660 * 470 * 1330mm Adaptive ambient tembiricha 0-30, Kupomha kumhanya 5.5L / s Pneumatic pefiyumu capping muchina Muchina uyu unotora izere pneumatic control, iyo inonyanya kukodzera mou ...